Global Voices teny Malagasy » Mitombo ny tsindry mahazo an’i Egipta itakiana ny famotsorana ireo malaza mpiaro zon’olombelona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Desambra 2020 2:34 GMT 1	 · Mpanoratra Dahlia Kholaif Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Karim Ennarah, olona iray malaza mpiaro zon'olombelona ao Egipta, mankalaza ny faha-37 taonany any am-ponja. Sary nampiasaina  rehefa nahazoana alàlana avy amin'ny Free Karim Ennarah.
Izahay sy Karim nandritra ny fankalazana ny tsingerintaonany, efatra taona lasa izay. Feno 37 taona androany i Karim saingy any am-ponja izy raha tokony hankalaza izany miaraka amiko. Miangavy, tsidiho ny https://t.co/V7vjWBpP4J  hijerenao izay azonao atao hanampiana hahazoana antoka ny famotsorana azy. @EIPR  #FreeKarimEnnarah  #freeEIPRstaff  pic.twitter.com/hI1chBbQol 
Nisy fanangonantsonia  iray natomboka sy naparitaka tao amin'ny media sôsialy ary nahasarika ireo mpanohana manerana izao tontolo izao ho an'ilay mpikatroka izay nosamborina nandritra ny fotoana nialàny sasatra tany amin'ny toeram-pialantsarana tao amin'ny Ranomasina Mena.
Olona iray tsotra nogadragadraina fahatany. Fantaro misimisy kokoa ato – https://t.co/RSmPCesSPB  #FreeKarimEnnarah  #FreeEIPRstaff  @EIPR  @jeky_kelly  pic.twitter.com/jHfJv6WFvL 
Azafady, tsidiho ny https://t.co/G2evUCkwFe  ary soniavo ny fitakiana. #FreeKarimEnnarah  pic.twitter.com/rA5UPaKNtw 
Tao anaty fanambaràna iray navoaka ho setrin'ny kiaka erantany, ny minisitry ny raharaha ivelany ao Egipta dia nandà  ny lazainy fa “ezaka fanindriana aloka ny fanadihadiana izay ataon'ny fampanoavana amin'ireo olompirenena egiptiàna miatrika vesatra fiampangàna”. Tao anatin'ilay fanambaràna, nampian'ny mpitondra teny avy amin'ny ministeran'ny raharaha ivelany fa ny fanjakana egiptiàna dia “manaja ny fotokevitry ny fanjakana tàn-dalàna sy ny fitoviana” ary iantohan'ny lalàna sy ny lalàmpanorenana egiptiàna ny fahalalahan'ny fiarahamonina sivily hanao ny asany.
Tao anaty bitsika  iray nalefa ny Alahady teo, nolazain'ny EIPR fa nangatahan'ny mpisolovava azy ny hamelàn'ny Fampanoavana Ambony misahana ny Fiarovam-Panjakana ireo fianakavian'i Ennarah sy Basheer mba ho afaka mitsidika azy ireo, satria sady “tsy hita niseho, no tsy tsikaritra na nandrenesam-baovao hatramin'ny nahatongavan-dry zareo tao amin'ny fanadihadiana tao Tora, na ny tao amin'ny fonjan'i Limna Tora,” entina ilazana ireo fonja roa itànana ireo mpikatroka.
Ny tale mpanatanteraky ny EIPR, Gasser Abdel-Razek, nandritra ny fisamborana ny 19 Novambra, dia natoka-monina anaty fonjakely mangitsy, tsy avela hahazo fitafiana mafàna ary nosolaina ny lohany. Nolazain'ny Amnesty International tao anaty fanambaràna iray tamin'ny 24 Novambra , fa atahorany “atao fanahy iniana tazonina amin'ny fomba tsizarizary ity bekotro maroholatry ny fiarovana zon'olombelona, raim-pianakaviana niteraka roalahy ity, mba hamaizana azy noho ny asa fiarovana zon'olombelona ataony.”
Nahitam-bokany ny kiaka nataonareo. Tsy noana sy mangatsiaka intsony i Gasser. Miangavy, aza mitsahatra 🙏 https://t.co/a13FUAKWLR 
“Tena maharikoriko ny famaliana faty ireo mpiaro zon'olombelona avy amin'ny ONG iray mpiaro zon'olombelona sisa am-perinasa ao Egipta, noho izy ireo nanatanteraka fotsiny ny zony hiteny malalaka tamin'ny firesahana momba ny toedraharahan'ny zon'olombelona ao Egipta,” hoy ny nolazain'ireo manampahaizana manokana momba ny zon'olombelona avy ao amin'ny Firenena Mikambana, tao anaty fanambaràna  iray nivoaka tamin'ny 27 Nomvabra, taorian'ireo fisamborana nanjo ny EIPR.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/12/02/150586/
 fanambaràna iray tamin'ny 24 Novambra: https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/3382/2020/en/